"Severny" sezindiza yasungulwa ngo-1929 futhi itholakala Zaeltsinskom wesifunda laseNovosibirsk. Sekudlule iminyaka engaphezu kwengu ukhona ayisishiyagalombili nambili, lowo "wabona" okuningi. Eminyakeni abesabekayo yiMpi Enkulu Yobuzwe kwaba sezindiza ezingemuva badlondlobala Iminyaka yangemva kwempi. isakhiwo esibulalayo lakhiwa ngo-1959. Kuyinto sikhathi angababaza kufanele kubhekwe zezimbali imisebenzi sezindiza. Ngo-1959, sezindiza yesibili lakhiwa Novosibirsk ngokuthi "Tolmachevo".
Isikhumulo sezindiza "North" (Novosibirsk) kushintshile isimo salo wahamba endleleni. Nakuba ngaleso sikhathi ayengaqondi ngempela wayethandwa kakhulu by abantu bakuleli dolobha. Kungakabiphi wayeseqhuba bexhashazwa ngenxa izidingo ndiza encane ngesimo "City Airport". Novosibirsk kancane kancane ngakujwayela endimeni ezincane "North", esebenza izindiza zesifunda kanye lendawo. Wathatha indiza yezemidlalo zezindiza. Ngezindlela eziningi, lokhu isimo nokwehla "Severny" sezindiza (Novosibirsk) lifanelwe ngenxa indawo yayo. Phela, isemzini, futhi, kuncike umoya ovela enyakatho-ntshonalanga, izindiza ophoqelelwe lokubikezela indlela flying phezu maphakathi Novosibirsk, okuyinto Yiqiniso, nakanjani kuthinte zezindiza ukuphepha.
Arsenal yezindiza amasayithi
"Severny" sezindiza (Novosibirsk) has arsenal yayo zezindiza ezintathu. I enamathela wayengomunye walaba ukhonkolo asphalt, omunye amaviyo amabili - phansi.
Isikhumulo sezindiza "North" (Novosibirsk) kungathatha izindiza ezilandelayo: An-2, 12, 24, 26, 28, 30, 32, 38, 72, 74, Yak-40 no--410, zonke izinhlobo ezinophephela emhlane. Izindiza Kwakuseshwa ikakhulu An-24 izindiza e Abakan, Nizhnevartovsk, Novokuznetsk, Novy Urengoy, Salekhard, Khanty-Mansiysk nakwamanye amadolobha.
indawo sezindiza idume futhi Ukulungisa Plant, kokuba ezinophephela emhlane eziyisishiyagalombili Mi-8. Kusukela ngo-2005, umnikazi sezindiza kuba inkampani okuhlangene isitokwe "Novosibirsk-Avia". "Severny" sezindiza Zemidlalo izindiza Novosibirsk Air Club steel core zamakhono. Umcimbi abalulekile wawuba ngasekuqaleni 2008 eWorld yasemoyeni Championships. Zonke izindiza Kwakuseshwa phezu izindiza emamaki Yak-52. Kwakuyisikhathi ekugubheni ezemidlalo zezindiza, acrobatics ezikhula ngaphandle kwenhlabathi futhi Awamapharashuthi, umoya-elalibhalwe phakade emlandweni ndawo.
Okwamanje sezindiza ivaliwe. Ngezindlela eziningi, lokhu kwaba nesandla ziwohloke elibukhali nineties. Ukunciphisa inani izindiza, ukuthengiselana ezingenanzuzo phezu ukudayiswa kwempahla, ukusetshenziswa okungafanele futhi ukungasebenzi isabelomali izimali kwaholela ucabanga wamabhizinisi kanye ukuthengiswa kwempahla. Kancane kancane wayinqoba eliphakeme igunya sezindiza "Tolmachevo", ngenxa indawo yayo kahle, imishini yesimanje zobuchwepheshe. On 01.02.2011, esikhumulweni sezindiza "North" (Novosibirsk) ivaliwe futhi kodwa angasebenzi.
Ngo esebona ukwakhiwa wesifunda zokuhlala igama elifanayo esizeni sezindiza "North" ipulani lokwakha edolobheni. Kwathengwa isakhiwo esiyisitezi esibulalayo watimisela kuya - njengoba somlando.
"Aeroflot": kanjani ukuchitha "imayela" we Savings Bank? Indlela buthelela "amamayela" futhi fly khulula?
Indlela yokwenza umuthi kaKhisimusi kusuka ephepheni elonakele ngezandla zakho siqu: imfundo yesinyathelo ngesinyathelo, isigaba somsebenzi kanye nemibono
7 Meyi e Kazakhstan iholide - Suku wasemuva we wobaba